Miguel ဟာနန်ဒက်ဇ် | | အစီအစဉ်များ
အင်တာနက်ကိုရှာဖွေခြင်းသည်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ဂူဂဲလ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏မူလစာမျက်နှာအဖြစ်တိုက်ရိုက်မြင်တွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်စာသားရိုက်ထည့်ခြင်းနှင့်ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းအားဖြင့်ရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ရုံသာမကရုပ်ပုံများကိုလည်းရှာဖွေနိုင်သည်ဟူသောအယူအဆထဲ၌မကျပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည် "reverse search" ဟုလူသိများသောအရာကိုသင်ပေးလိမ့်မည်၊ သို့မဟုတ်အင်တာနက်မှတူညီသောသို့မဟုတ်အလားတူရုပ်ပုံများကိုရှာဖွေလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဓာတ်ပုံ၏မူလအစကိုရှာဖွေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့မရှင်းလင်းသောပုံတစ်ပုံကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးယန္တရားများစွာ၏လူသိအများဆုံးအင်္ဂါရပ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့သင်ပေးလိုသည်။
ဤကိစ္စတွင်ရှိသည့်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုလက်ရှိအချိန်နှင့်ယခုကိစ္စတွင်ဖြစ်သည် image search engine ကိုညွှန်ကြားချက်ပေးမယ့်အစား ကျွန်တော်တို့ကိုရလဒ်တွေပေးဖို့စောင့်နေတယ်၊ ​​ငါတို့လုပ်မယ့်ဟာကနည်းနည်းလေးကွဲပြားတယ်။
ဤကိစ္စတွင်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ကျွန်ုပ်တို့၏ PC မှဆာဗာများသို့ဓာတ်ပုံတစ်ခုတင်မည် ရှာဖွေရေးယန္တရား၏မေးခွန်းနှင့်၎င်းသည်တင်ထားသောပုံနှင့်ကိုက်ညီသောရလဒ်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်လုံးဝတူညီရန်နှင့်အလွန်ဆင်တူသောရလဒ်များကိုပေးမည်၊ တကယ့်အားသာချက်။ ဒါဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
1 Google မှပုံရိပ်ရှာဖွေမှုကိုပြောင်းပါ
2 Bing မှပုံရိပ်ရှာဖွေခြင်း
3 Yandex ရှိပုံရှာဖွေခြင်းကိုပြောင်းပါ
ဂူဂဲလ်မှတစ်ဆင့်ပြောင်းပြန်ရှာဖွေမှုများကိုပြုလုပ်ရန် ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သိသင့်သည်မှာဘယ်ကိုသွားသင့်သည်။ ဒီအတွက်ငါတို့ကရိုးရာနည်းလမ်းကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ အဲဒါဟာဂူဂဲလ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားပြီး အိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ Google ကပုံများ.
ညာဘက်ခြမ်းတွင်ကင်မရာအိုင်ကွန်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်ပါကဓာတ်ပုံများကိုထည့်ရန်ကွန်ပျူတာ၏သိုလှောင်မှုကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့မှာရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိလိမ့်မယ်။
URL ကိုရိုက်ထည့်ပါ ကျနော်တို့ပြောင်းပြန်ရှာဖွေရေးလုပ်ဆောင်ချင်သော၏ပုံရိပ်၏
ဓာတ်ပုံကိုတိုက်ရိုက်တင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PC ကနေ။
အရင်တုန်းကငါတို့ပြောခဲ့တဲ့အဆင့်တွေကိုလုပ်ပြီးတာနဲ့၊ ညွှန်ပြအပြာ button ကို ပုံရိပ်ဖြင့်ရှာဖွေပါ။ ယခုမှာ Google search engine သည်၎င်း၏အလုပ်ကိုစလုပ်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ထိုအခါ၊ ဂူဂဲလ်သည်၎င်းအားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်၏ပုံမှန်ရလဒ်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသတင်းများ၊ ဆောင်းပါးများနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာများသို့ပို့ဆောင်လိမ့်မည်။ သူအဖြစ်သတ်မှတ်လိမ့်မည်ဟုဓာတ်ပုံများကိုတစ်စီးရီး အမြင်အာရုံတူအလားတူပုံရိပ်တွေ။ ဤရွေ့ကားပုံရိပ်တွေကျနော်တို့နောက်ကျောရှာဖွေရေးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်အရာဖြစ်တယ်။
ဂူဂဲလ်ကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ပြောင်းပြန်ပုံရိပ်ရှာဖွေခြင်းတွင်သူ၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ထိရောက်မှုအရအလုပ်နှင့်ကိုက်ညီသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အလွန်အားကောင်းနေသောကြောင့်ရလဒ်ကောင်းများရရှိသည်၊ ၎င်းသည်အရေးကြီးသောအားသာချက်ရှိသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပုံရှာဖွေခြင်း ဂူဂဲလ်ကကျွန်ုပ်တို့အားထိပ်ဆုံးခလုတ်နှင့်အတူကိရိယာများဆက်တိုက်ကမ်းလှမ်းသည်။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိုင်အမျိုးအစား၊ ပုံ၏အရွယ်အစားနှင့်အခြား parameters များကိုအခြေခံသောရှာဖွေမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်များသည်သင်၏ရှာဖွေမှုများကိုအမှတ်အသားပြုလိမ့်မည်။
Bing သည်စျေးကွက်ရှိအရေးအကြီးဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စမှာဂူဂဲလ်ကြီးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကျွန်ုပ်တို့မှာဒဏ္thာရီ မှလွဲ၍ ဘာမှမရှိဘူး မိုက်ကရိုဆော့ဖ။ သို့သော်၎င်းသည်ရှာဖွေရေးယန္တရားတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အသုံးပြုသူများစွာနှင့်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းပုံရပြီး၎င်း၏အသုံးပြုမှုမှာအတော်အတန်ကျန်နေဆဲဖြစ်သည်။
သို့သော်၊ Redmond ကုမ္ပဏီသည်၎င်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုမရပ်တန့်အောင်ဂူးဂဲလ်နှင့်စစ်မှန်သောအခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ Bing (link) ထဲကို ၀ င်ပြီးကျွန်တော်တို့မှာ reverse search လုပ်ဖို့ရွေးချယ်စရာရှိလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ PC မှပုံတစ်ခု တင်၍ ပုံတစ်ပုံကိုရှာပါ
ရုပ်ပုံတစ်ခုကိုရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သို့ဆွဲ တင်၍ နောက်ပြန်ရှာဖွေမှုတစ်ခုပြုလုပ်ပါ
ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်နိုင်ပါလိမ့်မည် အမြင်အာရုံရှာဖွေရေး ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဓာတ်ပုံ၏areaရိယာအတိအကျကိုချိန်ညှိရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယခင်ကရည်ညွှန်းခဲ့သောပိုမိုတိကျသောရလဒ်ကိုဖော်ပြလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတွင်၎င်း၏ချို့ယွင်းချက်များရှိသည်။
ပထမတစ်ခုမှာ Bing ဓာတ်ပုံရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွင် toolbar မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောပုံအမျိုးအစား၊ အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အခြားအခြေအနေများ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် Bing မှကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသမျှတွင်အဆိုးဆုံးအဖြစ်အပျက်များကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရလဒ်များကိုသန့်စင်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဒီ post
Yandex သည်ရုရှားမှဆင်းသက်လာသောရှာဖွေရေးယန္တရားဖြစ်ပြီး၎င်းကို၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှု၏ထိရောက်မှုအားဖြင့်မသိသူများကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်။ Yandex ကိုသုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ search engine ၏ဝဘ်ဆိုက်ထဲသို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည် (link ကို).
တစ်ချိန်ကအခြားရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့အတွေးအခေါ်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကင်မရာ၏အိုင်ကွန်ကိုကိုယ်စားပြုသောရှာဖွေရေးဘား၏ဘေးတွင်ခလုတ်တစ်ခုရှိသည်။ တစ်ချိန်ကကျွန်တော်ပြီးသားပုံရိပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို invoked ပါပြီ ဤလုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အောက်ပါရွေးချယ်စရာများရှိသည် -
ရှာဖွေရန်ခွင့်ပြုသည့်ပုံ၏ URL ကိုသုံးပါ
ရှာဖွေခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏ PC မှသို့မဟုတ်သိုလှောင်မှုအတွင်းသိမ်းဆည်းထားသောဖိုင်မှတဆင့်ပြုလုပ်ပါ
ထို့ကြောင့်ပုံရိပ်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် User Interface သည် Google နှင့် Bing တို့ကဲ့သို့ရင်းနှီးမှုမရှိသောကြောင့် tool များနည်းပါးသည်။ သို့သော် Yandex မှရရှိသောရလဒ်များသည်၎င်း၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပင်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကောင်းသည်။
တကယ်တော့ငါတို့ပြောနိုင်တာကအားကောင်းတဲ့ Google ရှာဖွေရေးကိရိယာများမှအပ Yandex reverse search သည်ယခင်ရှာဖွေသကဲ့သို့ကောင်းသည် (သို့) ပိုကောင်းသည်။
ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးဟာအင်တာနက်ပေါ်မှာတူညီတဲ့ (သို့) အလားတူရုပ်ပုံတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှာဖွေဖို့အတွက်ငါတို့ရဲ့ရွေးချယ်စရာတွေပါ။ သင်၏အလုပ်များကိုကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အစီအစဉ်များ » အင်တာနက်ပေါ်တွင်အလားတူသို့မဟုတ်အလားတူရုပ်ပုံများကိုမည်သို့ရှာဖွေရမည်နည်း
Windows 10 ကိုဘယ်လိုအဆင့်မြှင့်တင်ရမလဲ
အွန်လိုင်း PDF ကိုဘာသာပြန်ပါ။ သင့်ကိုကူညီမည့်အကောင်းဆုံးအခမဲ့ကိရိယာများ